Myanmar Defence Weapons: Bistion anti-ship missile system
Bistion anti-ship missile system
စနစ်သစ်လေး တစ်ခုပါ ကမ်းရိုးတန်းရှည်လျားတဲ့ ကျွှန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရန်သူစစ်သင်္ဘောတွေကို ပစ်ခတ်ချေမှုန်းဖို့ ထားရှိသင့်ပါတယ်။လိုင်းကောင်းမှထပ်တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်....။
mg February 10, 2011 at 7:32 AM
ထိုင်းစစ်သားတစ်ယောက်ကပြောသွားတဲ့ ယခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ထိုင်း ကမ္ဘောဒီယားနယ်စပ်ပြသာနာမှာ သုံးဖုံ့းအတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ တင့်ကားတွေဟာ အာရှမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ကြွားဝါပြောတယ်လို့ဆိုတယ်။
ဒီတင့်ကားတွေဟာ တကယ် အာရှမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်သလား?ဘလော့ owner ကြီးရော ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆသလဲခင်ဗျ။
MM March 4, 2011 at 2:41 PM
ထိုင်းစစ်သားက လေကြီးပြီးပြောတာပါ သူတို့ရဲ့ အမ်-၆၀ ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကား တွေမှာ တပ်ဆင်ထားတာက ၁၀၅မမ ပြောင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတင့်ကားကို အကေင်းဆုံးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။မြန်မာတပ်မတော် တင့်ကားတပ်ရဲ့ တီ-၇၂အစ် တွေမှာ ၁၂၅မမ တပ်ထားတယ်။စစ်ဆင်နိုင်မှု ဝန်းကျင်ကမိုင်၂၉၀ရှိတယ်၊တီ-၇၂အစ် က ၃၁၀ထိ မောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီပြင့်နိုင်ငံတွေမှာလည်း ပိုကောင်းတဲ့တင့်တွေရှိပါတယ်။စင်ကာပူတင့်တွေဟာ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Kyaw March 7, 2011 at 11:54 AM
All you need isacouple of 84mm Carl Gustavs and M-60 will be nothing butapile of ash. Myanmar army got over 1000 Carl Gustav shoulder launch recoiless rifles.
Low flying Mi-35s armed with anti-tank missiles can cause some serious damage as well. No worries.